I-Android Go: yintoni kunye nezinto zayo eziphambili | I-Androidsis
Yintoni i-Android Go? Yahluke njani kwezinye iinguqulelo?
I-Android Go yabhengezwa ecaleni kwe-Android Oreo. Ukusukela ukubhengezwa kwayo kunye nokukhutshwa okulandelayo, kuye kwakho amathandabuzo amaninzi malunga nale nguqulo yenkqubo yokusebenza. Kukho izinto ezithile malunga nayo ezicacileyo, ezinje ngokuba yinguqulelo yoluhlu olusezantsi. Kodwa kwangaxeshanye ivelisa amathandabuzo amaninzi kubasebenzisi. Ke ngoko, sikuxelela ngakumbi ngayo.
Lo nto Unombono ocacileyo malunga nokuba yintoni i-Android Go. Kuba kusenokwenzeka ukuba unamathandabuzo malunga nale nguqulo, iimpawu zayo okanye yintoni eyenza yahluke kwezinye iinguqulelo zenkqubo yokusebenza esiyifumanayo ngoku.
1 Yintoni i-Android Go?
2 Yintoni eyenza i-Android ihluke ngokwahlukileyo?
3 I-Android Go = I-Android esulungekileyo?
Yintoni i-Android Go?
I-Android Go ayisiyohlobo olwahlukileyo lwenkqubo yokusebenza, kwaye ayisiyiyo uhlaziyo. Yinto eyahlukileyo yenkqubo yokusebenza ifumaneka njengokuhlaziya / inguqulelo yayo engu-8.0. Ke ngoko, njengoko iinguqulelo ezintsha zenkqubo yokusebenza zifika, njengoko kusenzeka ngoku nge-Android Pie (9.0), iinguqu ezihambelanayo ze-Android Go ziya kukhutshwa.
Inguqulelo eyenzelwe iifowuni ezisezantsi, iimodeli ezingabizi kakhulu kwimarike. Kwiimeko ezininzi, iifowuni ezisebenzisa oku kwahluka zinamaxabiso angaphantsi kwe-100 euro. Iimodeli ezineenkcukacha ezisisiseko, ezinjenge-RAM ye-1 GB okanye ngaphantsi kunye nokugcinwa kwangaphakathi kwe-8 GB, umzekelo.
Ukuba sithathela ingqalelo ukubonwa kwefowuni yolu hlobo, sinokubona ukuba inkqubo yokusebenza iya kusebenza kancinci kwaye kuya kubakho iingxaki ezininzi zokusebenza kuyo. Kungenxa yoko le nto uGoogle esungule i-Android Go. Ukuze inkqubo yokusebenza isebenze kwezi ntlobo zeefowuni. Isese-Android, kunye nokusetyenziswa kwe-Android, kodwa ehlengahlengiswe kuluhlu olusezantsi kwintengiso.
Yintoni eyenza i-Android ihluke ngokwahlukileyo?
Iifowuni ezisezantsi zinendawo encinci yokugcina. Ke ngoko, kuyafunwa ukuba inkqubo yokusebenza ithathe indawo encinci kubo. Ke i-Android Go ithatha indawo encinci, kuba ishiya kuphela imisebenzi ebalulekileyo kunye eluncedo. Ke asinayo i-bloatware kule nguqulo. Inani lezicelo ezifakwe kwangaphambili kwifowuni lincinci, kuphela ezo zibaluleke kakhulu, kwakhona, akukho zicelo zivela kumenzi kule meko. Kuya kufuneka ulisebenzise kakhulu eli thuba.
Ukongeza, yonke into kwinkqubo yokusebenza yenziwe ukuba isebenze kancinci kangangoko kwezi ntlobo zeefowuni. Enye yeempawu eziphambili ze-Android Go kukuba ibonelela ngamava agudileyo, nangona ezi modeli zinamandla amancinci. Yayo, Iinguqulelo ezikhanyayo zezicelo zenkqubo zikhutshiwe. Sineenguqulelo zokuya kwii -apps ezinje ngeGmail, uGoogle Maps okanye iC Chrome. Ke, basebenza ngcono kokwahlukileyo.
Eziapps thatha indawo encinci kwaye usebenzise izixhobo ezimbalwa kumnxaba. Nangona, njengakwi-Android Go uqobo, ayisiyiyo yonke imisebenzi ekhoyo. Yimisebenzi ebalulekileyo kuphela ekhoyo.
Ke ngoko, siyabona ukuba i-Android Go ijolise ngokucacileyo ekugcineni idatha kunye nezixhobo. Ukugcina idatha lelinye lamaqhosha aphambili enkqubo yokusebenza. Sebenzisa idatha encinci, kokubini kwinkqubo nakwinqanaba lesicelo. Esi sesona sizathu sokuba sibe nezicelo kwinguqulelo yazo yeGo, eyilelwe oku kwahlukileyo kwenkqubo yokusebenza.
Kwakhona, siyayibona indlela Amaqela esithathu nawo enza usetyenziso kwiinguqulelo zeLite. Iinguqulelo ezilula, ezitya kancinci kwaye zinemisebenzi embalwa, kodwa zisungulwa ngeefowuni ezine-Android Go njengenkqubo yokusebenza. Ukusukela ngale ndlela unokuzisebenzisa, ngendlela efanelekileyo. Iiapps ezinje nge-Facebook okanye i-Instagram zineLite version yazo.
I-Android Go = I-Android esulungekileyo?
Enye yezona zinto zixhaphakileyo zixhaphakileyo yile cinga ukuba i-Android Go yayilingana ne-Android esulungekileyo. Oku kuthetha ukuba akukho maleko wokwenza ngokwezifiso ovela kumenzi, okanye usetyenziso kuwo. Endaweni yoko, luhlobo olungakhange ludlule ezandleni zomenzi. Kodwa oku akunjalo kolu luhlu sithetha ngalo.
Ukusukela i-Android Go ayinasithintelo kubuchule babavelisi ukongeza umaleko wabo ulwenziwo kolu luhlu. Ngapha koko, i-Samsung yazisa ngocoselelo lwayo kulwakhiwo olusezantsi ngeGo abasebenza kuyo. Ke ayisiyonto inqabileyo leyo, kunye nezinye iimveliso zenza okufanayo nanamhlanje.
I-Android Go yahlukile ethembisa ukuqhubeka nokuqhubela phambili kuluhlu olusezantsi, kuba iziphumo zibonakala zintle. Ayisiyo nguqulelo esiya kuyibona rhoqo eSpain okanye eYurophu. Kodwa kubaluleke kumazwe ahluphekayo, apho iifowuni ezikhoyo zisezantsi. Ukusukela ngale ndlela abasebenzisi baya kuba namava angcono omsebenzisi ngawo onke amaxesha. Usenendlela ende ekufuneka uhambe ngayo kwezi marike.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Iinguqulelo ze-Android » Yintoni i-Android Go? Yahluke njani kwezinye iinguqulelo?